Mpikatroka ao Beiroty Manomboka Andro Hijerena Ny Lovantsika Mba Hiarovana Ireo Toerana Manantantara Nefa Tandindonin-doza · Global Voices teny Malagasy
Mpikatroka ao Beiroty Manomboka Andro Hijerena Ny Lovantsika Mba Hiarovana Ireo Toerana Manantantara Nefa Tandindonin-doza
Voadika ny 18 Mey 2017 8:00 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, Italiano, Español, English
Ampahany amin'ilay petadrindrina lehibe nampiasaina ho an'ny Andro Hijerena ny Lovantsika. Sary feno.
Tanatin'ny taona maro taorian'ny ady an-trano Libaney tamin'ny 1975-1990, nanatri-maso fitroaran'ny fisintahan'ny fanjakàna sy fampandrosoana i Beiroty, izay nanova ny endriky ny tanàna, hatrany amin'ny morontsiraka ka hatrany amin'ireo havoana manodidina ilay saikinosy.
Ilay vanimpotoana, fantatra amin'ny hoe “vanimpotoanan'ny fanarenana” sy mazàna manondro ireo taona 1990s saingy mitohy mandraka ankehitriny, dia mahita ireo zavatra malaza manantantara ao Beiroty tandindonin'ny faharavàna, mba hanomezana toerana ny “fanavaozana”.
“Famafàna tsy ho anaty tontolo” no fahitàn'ireo eny amin'ny anjerimanontolo azy io, tamin'ny filazàna hoe “ny famafàna tsy ho anaty tontolo izay natomboky ny ady dia nohamafisin'ireo asa fanarenana taty aorian'ilay ady”, raha ny teny nataon'i Marwan Ghadour sy Mona Fawaz. Bruno Marot sy Serge Yazigi aza nandeha lavidavitra kokoa tamin'ny fitenenana hoe “ny fitomboan'ny fanitarana tanàndehibe atosiky ny tsena, ny tsy fahampian'ny drafitra fanitàrana mazava tsara ary ny fisian'ny tendro roa misy firehankevitra mifanohitra” dia mety hamafy “ny voan'ny fifandirana hoavy”.
Ho valiny, ireo mpikatroka ao Libanona dia nikarakara Andro Hijerena ny Lovantsika mba hisarihana ny sain'izao tontolo izao ho amin'ireo toerana manantantara maromaro tandindonindoza, sy handrisihana ny mponina ao an-toerana havitrika hiaro azy ireny. Tamin'ity indray mandeha ity, toerana roa no nifantohana: ny Lapan'i Hneine sy ny Saikinosin'i Dalieh.
Ny Lapan'i Hneine dia iray amin'ireo tranobe miavaka indrindra ao Zokak el-Blat, zaridainan'ilay distrikam-borizano ao ivelan'ny rindrina fahinin'ny tanànan'i Beiroty. Taorian'ny nipoahan'ny ady an-trano tamin'ny 1975, lasa toerana fipetrahan'ireo fianakaviana nafindra toerana ny tao amin'ny ambany rihana, izay nampiasàna rindrina vonjimaika hitsinjarana ireo toerana malalaka be.
Tamin'ny 1990, nesorina ireo nipetraka tao farany ary amin'izao fotoana ilay lapa dia foana sy mikorosy. Maro tompo ilay tranobe, tsy nisy fifanarahana mazava momba izay hiafaràny, raha mihamafy kosa ny hazakazaky ny fanamboaran-trano ao amin'ny faritra.
Ary momba ny Saikinosin'i Dalieh, io dia zavatra iray miavaka ao amin'ny faritra fitsangatsanganana any amin'ny morontsiraky ny tanàna, misy ireo soatoavina manankarena ara-tsosialy sy kolontsaina. Ilay faritra misokatra sy be vato manamorona ny ranoomasina dia efa an-jato taona no nampiasan'ireo mpiasa avy amin'ny saranga antonony azy isanandro ho amin'ireo hetsika fialamboly toy ny lomano na fetibe ara-pinoana, hatramin'ny fambolena sy fanjonoana.
Efa fomba nahazatra hatry ny fahagola ny fahafahan'ny olona mandeha eny amoron'i Beiroty, nanomboka teo ambany fitondrana Ottoman (taonjato faha-16 hatramin'ny 1918) ary nitohy nandritry ny fepotoana nitondran'ny Frantsay (1920-1943), niaraka tamin'ireo lalàna nandràra ny fampandrosoana ny teny amorontsiraka.
Saingy hatramin'ireo taona 1960s, nisy andianà lalàna vitsivitsy nanaisotra ny ankamaroan'ireo fiarovana ny faritra amorontsiraka, niteraka fampandrosoana somary tsy voaara-maso.
Nohararaotin'ireo matanjaka mpampiasa vola amin'ny sehatry ny fanorenana trano io, izy ireo izay nahavita naka ho azy ireo efa ho ilay faritra manontolo mihitsy. Ankehitriny, ilay tompony amin'izao fotoana izao dia manosoka hevitra hananganana toerana fialantsasatra amoron-dranomasina tantanin'olon-tsotra eo, ary ireo fehezanteny voalohany amin'ity asa ity dia ahitàna ny fandravàna ireo toeram-pialofan'ny mpanjono sy famefena ilay faritra tsy ho azon'ny daholobe idirana.
Vondrona roa no nikarakara ilay Andro Hijerena ny Lovantsika.
Ny vondrona Save Beirut Heritage (Vonjero ny Lovan'i Beiroty), ONG tarihan'ireo mpirotsaka an-tsitrapo miasa ho an'ny fiarahamientana ho fanarahamaso ireo tranobe lova, sy miasa ho toy ny mpisintona lakolosy rehefa misy ahiahiana ho fandravàna tsy ara-dalàna, nanao fangatahana mba hahatonga ny Lapan'i Hneine ho ao anatin'ny lisitry ny Andro Fanamarihan'ny Tahirimbola Erantany ho an'ireo Lova – World Monuments Fund’ (WMF). Tamin'ny 1965 ny WMF, fikambanana iraisampirenena tsy miankina amin'ny fanjakana, ary tsy mitady tombony ara-bola ” no naorin'ireo olona niasa loha vokatry ny fihazakazaky ny fandravàna ireo tahiry sarobidy artistika manerana ny tany.”
Ary ny Fanentanana Sivily hiarovana ny Dalieh ao Raouche, nifampizara habaka ireo vondron'olontsotra sy fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana izay miara-misotsaha an-tsehatra mahery vaika ho fiarovana ireo toerana iraisan'ny daholobe, ny fahasamihafàna ara-tontolo iainana sy ara-kolontsaina, nanaraka ny Saikinosin'i Dalieh.
Sary an'ny Beirut Report. loharano.
Ny Andro Hijerena ny Lova raha ny marina dia hatao mandritry ny andro vitsivitsy eo anelanelan'ny 18 May sy 21 May, hahitàna resadresaka sy adihevitra ho an'ny besinimaro, fidirana an-tsehatra amin'ny fomba artistika hataonà toerana iray manokana, fampirantiana, atrikasa fianarana sy fitsidihana toerana, kaonseritra, tsenan-kanina sy foara an-dalambe.
Ilay fandaharanasa dia ikendrena ny hanekena ireo olona sy mpampiasa ao an-tanàna ho toy ny mpiaramiasa mavitrika amin'ny tolona hitahirizana ny lovan'ny tanàna ary hamelàna azy ireo hilaza ny ahiahiny momba ny mahatonga ireo fihazakazaky ny fanitarana tanàndehibe atosiky ny tsena sy ny gaboraraka ara-pitantanana ho anton'ny manova ny endrika sy ny maha-izy azy an'i Beiroty.
Ireo toerana roa ireo dia samy napetraka ho ao anatin'ilay lisitra lavabe misy toerana 48 manerantany tandindonindoza. Ny fanantenana dia mba hisarika ny saina ho amin'ireo toerana hafa tandindonindoza izy io.
Ireo toerana toy ny Red House (Trano Mena) ao amin'ny faritr'i Beiroty, izay lazaina fa efa hatrany amin'ny taonjato faha-18, ny La Maison Rose, na Trano Mavokely, iray amin'ireo lapabe tranainy indrindra ao Beiroty efa hatrany amin'ny taonjato faha-19, ny Ramlet El Bayda, ilay hany torapasika sisa ho an'ny daholobe ao Beiroty, ny Laziza Brewery, fantatra ihany koa amin'ny hoe “La Grande Brasserie du Levant”, iray amin'ireo orinasa lehibe voalohany tao Libanona ary lazaina fa ny tranainy indrindra amin'ireo trano mpanao zavapisotro any Afovoany Atsinanana, ny Horsh Beirut, ilay faritra maitso lehibe indrindra ao an-tanàna, ary ireo sisankorontan'ny fahiny hita ao amin'ilay antsoina hoe Distrika Dizitalin'i Beiroty ao afovoan'ny renivohitra, dia ohatra vitsivitsy amin'ireo tsy firaharahan'ilay tanàna ny lovany ara-kolontsaina mba ho fanohanana ireo fampiroboroboana ny tanàndehibe sy ny asa fanorenana trano..
Araka ny nohazavain'i Florence Massena, “marika amantarana ny tsy fisian'ny drafitra fanitàrana ny tanàna ao Libanona renivohitra” izy ireny, izay toerana andresen'ny vola ireo lova”.
Tamin'ny Febroary 2017, nesorina tsy ho ao anatin'ny “lisitr'ireo tranobe arovana” ny Red House, volana fito monja taorian'ny nametrahana azy tao anatin'ilay lisitra. Ny La Maison Rose koa miatrika hoavy tsy azo antoka taorian'ny nahavitan'ny artista Britanika iray nitondra azy io fotoana fohy ho eo ambany mason'ny haino aman-jery. Nosokafana ho an'ny daholobe izy io tany amin'ny faramparan'ny taona 2016, nandritry ny volana roa. Raha ny an'ny Laziz Brewery, nanomboka ny Martsa 2017 ny fandravàna azy mba “hanokafana làlana ho an'ny fanorenana trano maro sosona mihaja sy lafovidy”.
Mandritra izany fotoana izany, tandindonin-doza ankehitriny ny Horsh Beirut “noho ireo asa fanorenana toeram-pitsaboana ao anatin'ilay kianja”, na efa nampidirina ho anaty lisitry ny toerana voajanahary aza izy io hatrami'ny 1940. Tany amboalohany ilay kianja dia naharakotra 1.25 tapitrisa metatra toradroa tamin'i Beiroty, saingy ankehitriny dia nihena ho telozoro manana habe 330.000 metatra toradroa sisa. Ny Septambra 2015 izy io no voalohany nosokafana ho an'ny daholobe taorian'ny 20 taona nikatonany.
Momba ireo sisankorontan'ny fahiny, vao haingana izy ireo no voapongatra ary toa hoe tamin'ny vanimpotoana Romana. Vitan'i Habib Battah avy ao amin'ilay bilaogy malaza ‘Beirut Report’ ny nitondra topimaso tamin'izy ireny ary vokatr'izay dia niharan'ny herisetra ara-batana avy amin'ireo mpanamboatra ary fandrahonana am-bava avy amin'ny olona ambony iray ao amin'ny governemanta noho ny namoahany sary maro avy amin'ireo sisankorontana.
Ho an'ny lisitra feno amin'ilay fandaharam-potoana nomanina ho an'ny Andro Hijerena ny Lovantsik, eto kitihana.